aya mavhidhiyo emimhanzi akafanirwa zvachose pa iphone 11 pro
Kuru Nhau & Ongororo Aya mavhidhiyo emimhanzi akapfurwa zvachose paiyo iPhone 11 Pro
Aya mavhidhiyo emimhanzi akapfurwa zvachose paiyo iPhone 11 Pro
Gadziridza: Selena Gomez akaburitsa yechipiri mimhanzi vhidhiyo yakanzi 'Tarisa Iye Zvino' iyo inobata nemamiriro ekuvhenekesa akaomesesa. Zvinoitawo kunge zvakatorwa zvachose pa iPhone 11 Pro. Iyo yekutanga nyaya inoenderera pazasi.
Apple inoda kuratidzira iPhone makamera pasocial media neese marudzi emafoto nemavhidhiyo ayo anotumirwa sechikamu cheyakakurumbira '#ShotOniPhone' mushandirapamwe, asi svondo rino hofori yeCupertino yakabatana naSelena Gomez kuratidza zvakanyanya izvo iyo iPhone 11 Pro anokwanisa ku.
Mushure mehurefu hwakareba kubva mumimhanzi, Selena Gomez akadzoka nezuro rwiyo nerwiyo rutsva rwakanzi 'Ndirasire Iwe Kuti Undide.' Kufanana neyese huru singles, rwiyo rwunoperekedzwa nekutonhora mumhanzi video iyo, mune ino kesi, yakapfurwa zvachose mutema nemachena ichishandisa iyo iPhone 11 Pro nemutungamiriri anozivikanwa Sophie Muller.
Iwe haugone kutaurira Vhidhiyo yaGomez haina kupfurwa pane zvemhizha zvehunyanzvi asi kutora mafirimu pamwe raisave iri basa rakaomesesa kune Apple yazvino mureza. Chiitiko chega chega chinoratidzira mamiriro akafanana emwenje angave akagadziriswa kuona kuti iPhone 11 Pro haina kunetseka. Pamusoro pezvo, sekusimbisa kunoita Apple pachayo, 'software uye hunyanzvi hwesoftware' yakashandiswa panguva yekutora mifananidzo. Kana zviri zvekugadzirisa, izvo zvakaitika pakombuta yeMac.
Munguva yakapfuura, makwikwi eanokwikwidza akabatanawo nezviso zvine mukurumbira kuratidza kwavo kamera kamera. Google yakapfura vhidhiyo yese yemimhanzi yaJohn Legend paPixel 2 gore rapfuura, kunyangwe iyo yaive nemamiriro ekuvhenekesa akaomarara. Imwe mhando yakadai saHuawei yakabatana nevanoona vafotori, nepo Apple pachayo yakapfura yose Yemazuva Ano Mhuri episode pane iyo iPhone 6 kumashure muna 2015.
samsung galaxy j7 ongororo 2018
yakanakisa skrini yekudzivirira noti 8
Apple ichagumisa zvachose iPhone 4 Hardware rutsigiro mwedzi uno
Izvo zvinotyisa: iPhone 7 mutengo uye zuva rekuburitsa muUK, Germany, France, China, Japan nevamwe
Apple Yekucherechedza Series 5 vs Fitbit Versa 2
Nhema iPhone 13 Pro inonzi ichave yakasviba zvakanyanya kupfuura zvigadzirwa zveGrafite uye Space Grey Apple
Maitiro ekugadzira GIF pane Samsung & apos; s Galaxy S10, S10 Plus kana S10e pasina kurodha chero maapp
Boost Mobile inopa kutema yako MetroPCS kana Cricket isina waya bhiri muhafu
LG V20 vs LG V10 vs LG G5: specs kuenzanisa
Facebook inotanga kuburitsa UI nyowani pane zvishandiso zveApple
Sangana neBeats Studio Buds: inoshanda ruzha kudzima uye zvimwe zve $ 149